काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी, कस्ताे बन्ला माेडालिटी?::Best Online News Portal of Nepal
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी, कस्ताे बन्ला माेडालिटी?
मंगलबार, भाद्र १६ २०७७
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई केही खुकुलाे सहित निरन्तरता दिने तयारी गरिएकाे छ । उपत्यमाभित्रका ३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमण निरन्तर बढिरहेकाले थप एक साता निषेधाज्ञा गर्ने तयारी प्रशासन कार्यालयहरुको छ ।
तर, यो पटक अत्यावश्यकसँगै थप केही क्षेत्रलाई खुकुलो पारिनेछ । त्यसको मोडलिटीबारे कस्ताे बनाउने भन्ने बारे मंगलबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, ललितपुरका नारायणप्रसाद भट्ट र भक्तपुरकी हुमकला पाण्डेबीच भएको भर्चुअल बैठकमा छलफल भएको छ ।
उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि तीनै जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३ भदौदेखि लागू हुने गरी एक साता निषेधाज्ञा लगाउने आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि भदौ १० गते पुनः ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेका थिए । जुन बुधबार मध्यरातिबाट सकिँदैछ ।